Kooxda Barcelona oo halis ugu jirta dhigeeda Manchester United sababa la xiririira – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Kooxda Barcelona oo halis ugu jirta dhigeeda Manchester United sababa la xiririira
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa wuxuu dhawaan sheegay in walwal xoogan uu ka jiro gudaha kooxda Barcelona, sababa la xiriira in Manchester United ay xiiseeneyso saxiixa goolhaayaha reer Germany ee Marc-André ter Stegen.
Talaabadan cusub ay dooneyso inay qaado kooxda Manchester United ayaa imaaneysa kadib marka uusan ilaa iyo haatan saxiixin David de Gea heshiiska cusub uu kusii joogayo garoonka Old Trafford.
Maamulka kooxda reer England ee Manchester United ayaa waxay ku fikirayaan inay sameeyaan saxiixa goolhaayaha kooxda Barcelona Marc-André ter Stegen, maadaama ay suuragal tahay in David de Gea uu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford.
Saraakiisha kooxda Manchester United ayaa waxay miiska u saari doonaan Brcelona aduun dhan 100 milyan oo euros, si ay kala saxiixdaan Ter Stegen, waxaase intaas sii dheer inay u balan qaadeen inay siin doonaan mushaar ka badan kan kooxda Barcelona.
Kooxo fara badan sida Paris Saint-Germain, Barcelona iyo Real Madrid, ayaa isha kuwada haya xaalada goolhayaha reer Spain ee David de Gea, hadii uusan saxiixin heshiis cusub dhamaadka sanadkan.
Kooxda Barcelona oo halis ugu jirta dhigeeda Manchester United sababa la xiririira added by admin on 17/10/2018